आठपहरिया राई र दशैं - Kanchanjangha Online
कञ्चनजंघा अनलाईन ९ कार्तिक २०७७, आईतवार १२:२१ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) ९९ पाठक संख्या
हटिया लाग्ने त्यो दिन बिहीबार उसै त दशैंको टिकाको दिन पर्‍यो, हाट भर्ने मानिसहरु आउने कुरै भएन । तर त्यही दिन दुई जना आठपहरिया राई महिला भने मौसमअनुसारको फलफूल बेच्न रित्तो हटियामा आएका थिए । ती आठपहरिया राई महिलाहरु दशैं र त्यसमा पनि टिकाको दिन किन रित्तो हटियामा सामान बेच्न आएका होलान् ? मेरो कलिलो मनमा त्यसबेला यो प्रश्न खेलिरह्यो ।यी माथिको प्रसँग यस अर्थमा मैले उठाएको हो कि आठपहरिया राई र दशैंको सम्बन्ध के छ ? दशैंको सन्दर्भ आउनासाथ जंगबहादुर राणाको समयमा मारिएका दुई साँस्कृतिक सहीद रामलिहाङ र रिदामाको प्रसँग आइहाल्छ । “दशैं हाम्रो चाडै होइन” भन्नेहरुले यी दुई सहिदको उदाहरण दिइहाल्छन् । यस प्रसँगमा आफूले जाने बुझेको र भेटेको कुरा यस लेखमा पस्कने उद्देश्य यो लेखकले राखेको छ ।
१९३३ सालमा दशैं नमान्दा रामलिहाङ र रिदामा आठपहरिया राईलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको आदेशमा धनकुटामा झुण्ड्याएर मृत्यूदण्ड दिइएको थियो भन्ने मान्यता नेपाली आदिवासी जनजाति समुदायमा स्थापित भइसकेको छ । यी दुई सहिदलाई विम्व बनाएर विभिन्न साहित्य पनि लेखिदै आएको छ ।यी दुई सहिदका बारेमा लिखत फेला पार्ने यो लेखकको प्रयास भने सफल हुन सकिरहेको छैन । आठपहरिया समुदायका बौद्धिक युवाहरु धन आठपहरिया र नारायण आठपहरियासँग यी दुई सहिदकाबारेमा राखिएको
जिज्ञासामा आएको उत्तर यस्तो छ :-
यो पल्टन लामो समयसम्म धनकुटामा रह्यो । धनकुटाको अन्वेषक ठाकुर बरालले निशान भगवति परिसरमा अध्ययन गरी त्यहाँ वि.सं. १८७९ असार १० मिति उल्लेख भएको शिलालेख फेला पारे । यसबाट धनकुटामा श्रीजंग पल्टनको निशान त्यसै समयमा राखिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । लिम्बुवानका विभिन्न ठाउँमा लिम्बू सुब्बाहरुले पञ्चायतकालसम्म दशैंको बेला नगरा निशानको तामझामका साथ पूजा गर्थे । बली दिन्थे । तर धनकुटामा निशान राखिएर पनि आठपहरिया राईले निशानको पूजा कहिल्यै पनि गरेको देखिएन ।
यसरी निशानको पूजा नगरे पनि, जबरजस्ती दशैं मनाउने सरकारी प्रयासको अवज्ञा गर्दा दुई व्यक्तिको प्राण हरिएको इतिहास भए पनि आठपहरिया राईहरुमा दशैं भने लादिएको प्रमाण फेला परेको छ । राजा राजेन्द्रविक्रम शाहको समयमा जारी एक रुक्का यसको प्रमाण हो । धनकुटाको मार्गाथानको पूजाहारी खलकलाई दशैंमा पूजा गर्न एक गुठीसमेत स्थापना गरिएको प्रमाण उक्त रुक्काबाट प्राप्त हुन्छ । धमिलो र मुस्किलले बुझिने उक्त रुक्काको फोटोकपि धनकुटा, ताङखुवा (हालः धरान) निवासी मुन्धुम तथा इतिहासविद भरत तुङघङले यस लेखकलाई उपलब्ध गराएका छन् । वि.सं. १८९२ को वैशाखमा धनकुटाका वाहिदुमसिंह राईका नाममा उक्त रुक्का जारी भएको देखिन्छ ।
Source : Nepalisamachar.com